होली किन मनाइन्छ ? « Artha Path
होली किन मनाइन्छ ?
काठमाडौं । होली नेपाली सस्कृतिलाई झल्काउने एक पर्व हो । होलीलाई फागु पुर्णिमाको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । हिन्दू संस्कृतिमा प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होली पूर्णिमाको दिन होली पर्व मनाइन्छ । होली नेपाल, भारत तथा अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्वपूर्ण चाड हो । होलीलाई रङ्गहरूको चाड पनि भनिन्द्ध । होलीको दिन मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्गहरू लगाएर रङ्गिन बनाउछन् ।
होली खेल्ने दिन भन्दा एकदिन पहिला राती होलीका दहन गरिन्छ । राती होलीका दहन गरिसकेपछि बिहान पानीमा रङ्ग घोलेर एक अर्कामाथि फाल्ने चलन छ । होलीको दिन ‘पुरानो कटुता समाप्त गरेर, दुस्मनी बिर्सेर मान्छे एकअर्कासित मिल्छन्’ । यस पर्वलाई फागुनको महिनामा मनाउने भएकाले यसलाई फगुआ पनि भनिन्छ ।
होली पर्व घरपरिवार साथीभाइ आपसमा रङमा रङ्गिएर उल्लासपूर्वक मनाउने फागुन पूर्णिमाको अवसरमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि शहरसम्म हातमा रङ र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै, बजाउँदै, रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी रिसईबीलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा लिइन्छ ।
आजको दिन नेपालमा सार्वजनिक विदा दिईन्छ, उपत्यका लगायत अन्य ठाँउहरुमा आजै अर्थात फागुन पूर्णिमाकै दिन अनि तराई क्षेत्रमा भोलीका दिन विदा दिईन्छ ।
रंगहरुको पर्व होलिमा विभिन्न प्रकारका रंगमिश्रीत रंगहरुलाई प्रयोगमा ल्याईने गरिएको छ । यी रंगहरु केवल मनोरंजन र आकर्षकताको लागि मात्र नभई रंगहरुको धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व पनि रहिआएको छ । होलिमा प्रयोग गरिने बिभिन्नथरी रंगहरुमध्ये नीलो रंगलाई धर्मयुद्धको प्रतीक मानिन्छ । त्यसैले नीलो वर्णका श्रीहरिले अधर्म नाश गर्न र धर्मको रक्षा गर्न प्रत्येक युगमा अवतार लिँदै आएको धार्मिक मान्यता छ । लोकहितका लागि उनले विषपान गरेर महादेव नीलकण्ठका रूपमा कहलिए ।
पहेंलो रङ्ग विष्णु र योगेश्वर श्रीकृष्णको प्रिय रङ्ग हो। गणेशजी हरेक रङ्ग मन पराउँथे। रातो रंगलाई शक्ति र सौभाग्यको सूचक मानिन्छ । त्यसैले देवताहरूले रातो रंगको पहिरन लगाउने गर्थे भने मान्यता रहिआएको छ । यसवाहेक होलिमा प्रयोग हुने अन्य रंगहरुको पनि आफ्नै धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व रहिआएको छ ।